Indlu yami isendaweni eqhelile ePera-Horion -Nissou, eduze komgwaqo omkhulu nobaluleke kakhulu waseCyprus. Ukufinyelela kalula ngemoto kuwo wonke amadolobha amakhulu , agcwele izihlahla zezithelo, kude nezindawo ezinomsindo nezinabantu abaningi, kodwa ngesikhathi esifanayo eduze kakhulu nazo zonke izinhlobo zezinsizakalo. Sinikeza ama-studio amabili, ama-studio amabili angawodwa, ahlukene futhi ahlome ngazo zonke izinhlobo zezinsiza ezidingekayo. Isitudiyo ngasinye singahlalisa abantu abadala abangu-2 kanye nengane.Enganeni kuzokhokhiswa ama-euro angu-10 ngobusuku ngabunye.
Ukufakwa komsindo ogcwele nokushisa, kuthule kakhulu futhi kunothando kakhulu , ikakhulukazi ngesikhathi sasebusuku, ngenhlanganisela yezibani nezihlahla.
Zombili izitudiyo ZINAMAGEZA E-JACCUZI !!!
Ngihlale ngizama ukuhlanganyela nezivakashi zami. Ngikhuluma kahle isiNgisi ( Ngingunjiniyela kagesi we-Msc ngiqeda inyuvesi yase-Notinham yase-England). Ngihlala ngisiza izivakashi zami ngizichazela ukuthi iziphi izindawo engingazivakashela ( noma ngingazivakashi ) , ngizikhombisa zonke izinsiza esinazo endaweni ye-sorrounding futhi ngihlale ngilungele ukuphendula noma yiluphi uhlobo lwemibuzo
Ngihlale ngizama ukuhlanganyela nezivakashi zami. Ngikhuluma kahle isiNgisi ( Ngingunjiniyela kagesi we-Msc ngiqeda inyuvesi yase-Notinham yase-England). Ngihlala ngisiza izivakash…